Rehefa Betsaka Mpiady Avy Any Ivelany Loatra Ny Tanàna Syriana Ka Lasa Fiteny Mahazatra Ny Teny Anglisy Sy Alemàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Marsa 2016 8:58 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Ελληνικά, Français, عربي, 日本語, English
Mpiady avy any ivelany ao amin'ny vondrona ISIS (Daesh) taorian'ireo fivavahana Eid Al Adha tao #Aleppo. Loharano: @Terror_Monitor
Iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra any amin'ny faritanin'i Aleppo i Manbij. Mitoetra eo avaratry ny ambanivohitry Aleppo any amin'ny faritra avaratr'i Syria, eo ambany fitantanan'ny ISIS (Daesh amin'ny Arabo) ilay firenena hatramin'ny volana Martsa 2014. Feno mpiady avy any ivelany i Manbij, hany ka lasa fiteny mahazatra ao amin'ilay tanàna kely ny teny Anglisy sy Alemana ankehitriny.
Manbij, nopetahan'ireo Jihadista anarana hoe Londona Kely, andaniana antsasak'adiny amin'ny fiara eo avy any amin'ny sisintany Tiorka, ary fijanonana voalohany ho an'ireo mpiady avy any ivelany mandeha ho any Syria hanjohy ny ISIS. Araka ny tatitra vao haingana tao amin'ny Telegraph, ilay tanàna no manana isany betsaka indrindra amin'ny Eorôpeana miohatra amin'ireo tanàna hafa any Syria. Ireo Britanika no eny an-tampon'ny lisitra, arahan'ireo Alemàna sy Frantsay.
Tsy ilaina intsony ny milaza hoe tsy mahafaly ireo mponina eo an-toerana io rodorodo be anà Jihadista avy any ivelany io. Ny Novambra 2014, namboraka zavatra tena niainany tao amin'ny bilaoginy i Goha's Nail, mikasika ny fomba fidiran'ireo mponina eo an-toerana amin'ny rafitry ny governemanta ISIS:
Toa hita ho tsy mavitrika loatra hampiditra mpikambana tsy dia vonona ny hiditra lalina ny IS (fanjakàna Islamika). Raha Syriana ny sasany amin'ireo mpitantana ny IS, maro ireo avy any ivelany. Ho an'ireo Manbijis, tian'izy ireo ihany ny mitazona ny vondrona eo akaikiny; tiany ireo fomba sasany amin'ny fitantanan'ny IS, fa tsy tia hanakaiky be loatra izy ireo. Miandry izy ireo anefa hoe anisan'ny tetika lavitra ezaka hampifanakaikezana ny vondrona amin'ireo olona tantaniny ny fifantohan'ny IS amin'ny resaka fampianarana sy ny fampianarana ireo fotokevitra amin'ireo ankizy.
Namoaka lahatsary ny #ISIS mampiseho ireo ankizy, ny sasany amin'izy ireo Britanika, ampiofanina sy ampianarina ny fotokevitra arahany ao amin'ny tanànan'i Manbij
Teo amin'ny 12.000 no isan'ireo mpiady novinavinaina avy any ivelany miady miaraka amin'ny ISIS any Syria sy Iràka, ny volana Jona 2014. Kanefa, araka ny tatitra ny volana Desambra 2015 avy tamin'ny Vondrona Soufan (orinasa iraisampirenena fakàn-kevitra statetjika ), efa avo telo heny io isa io ary ankehitriny mahatratra 31,000, ahitàna zompirenena Arabo roa, sahala amin'ny Toniziana sy Saodiana, ary maherin'ny 5.000 ireo nalaina avy tany amin'ireo firenena Eorôpeana. Frantsa fotsiny izao nolazaina ho nahitàna mpiady miisa 1.800, ary Angletera nanome 760 isa hafa.
An Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria & Iraq @TheSoufanGroup Dec 2015 https://t.co/NWSMiydppl pic.twitter.com/dEdVI0ob3Q
Fanehoana ny Onjan'ireo Mpiady avy any Ivelany ao Syria & Iràka @TheSoufanGroup Dec 2015
Niditra ny faritra tantanan'ny ISIS ireo olona, avy any amin'ny firenena 86 farafahakeliny — izay nisy fitomboana manakaiky ny 300 isan-jato tamin'ireo fampidirana mpikambana vaovao avy any Rosia sy Azia Afovoany. Nilaza ny Vondrona Soufan fa olona miisa manakaiky ny 150 sy 130 eo no avy any Etazonia sy Kanada, araka ny filaharany, izay tsy dia nisy fiovàna raha oharina amin'ny fironana hita tamin'ny herintaona, na eo aza ny fanentanan'ny ISIS mafimafy kokoa ho fandraisana mpikambana avy any Amerika Avaratra, izay mampiasa mafy ny media sosialy. Milaza ny Vondrona Soufan fa efa miatrika mandrakariva ny fandrahonan'ireo mpiady nofanina izay lasa niverina any amin'izy ireo ireo firenena Tandrefana.
Ny tena olana, niverina any amin'ireo firenena Tandrefana niaviany ny 20 na 30 isanjaton'ireo mpiady, midika hoe hiatrika mpiady maro efa tsara ofana izay manana fifandraisana manerantany ireo firenena ireo.
Ao amin'ny lahatsoratra amin'ny bilaogy, manoratra izao ilay Britanika Mujahidin any Syria (pietervanostaeyen):
Tsy fantatro mihitsy hoe inona no nahatonga ny fahatongavana maron'ireo Britanika mpiady avy any ivelany ho any Syria, fa tampotampoka teo, niverina nisokatra indray ny fitadiavana “Eorôpeana be volombava”. Niantomboka tamin'ny lahatsary avy tamin'ny Vice io, nampiseho tafatafa miaraka tamin'ireo Britanika roa izay miady any Syria ankehitriny. Tena mahaliana tokoa ny tafatafa toy izany, satria ireo lehilahy ireo manazava hoe inona no antony nahatonga azy ireo niala ny tanàna fonenany tany Angletera ho an'ny Jihad ao amin'ny tanàna rotritrodiky ny ady ao Syria.
Taorian'ny efa ho roa taona teo ambany fitantanan'ny ISIS, tsy faly amin'ny fitantanana Silamo ireo Manbijs ary nanao hetsi-panoherana araka ny pejy Fecebook an'ny Syria Post, izay nandefa ito lahatsary eto ambany ito miaraka amin'ny fanehoan-kevitra :
‎Posted by ‎سوريا بوست Syria Post‎ on‎ 16 نوفمبر،2015
“Jereo ireo maherifon'i Manbij, izay na eo aza ny fiarovana mafy ao amin'ny tanàna, midina an-dalambe mitaky ireo vondrona mahery fihetsika hiala eo amin'ny tanàna.”
Marina, mijaly tokoa ireo olon-tsotra eo ambany fitantanan'ny ISIS, noho ireo daroka an-habakabaka nataon'ny fiarahana iraisampirenena tarihan'ny Etazonia indrindra indrindra, izay manery ireo olona hitsoaka ny faritra mba hiaro ny ainy. Nitatitra tao amin'ny pejy Facebook-ny tamin'ny teny Arabo ny Al-Souria Net, ny Oktobra 2015, hoe maro ireo olona mangataka eny an-dalambe mba hahafahana manapitra ny volana:
Maro ireo olona mangataka ao amin'ireo toerana tantanan'ny ISIS any Avaratr'i Aleppo
Noho ireo fepetra maro noraisin'ny governemanta mikasika ny filaminana, nihena ny fahazoana fanampiana, nahatonga ny fangatahana ho faobe, indrindra fa ireo vehivavy, ankizy, ary ireo olona nafindra toerana:
[…] ao amin'ny tanànan'i Manbij, manomboka mipoitra ireo fianakaviana mahantra izay mangataka mba hahazo zavatra entiny hohanin'ireo havany any an-trano — ireo fianakaviany izay nafindra avy tany Al Raqqa sy Deir al-Zour, indrindra indrindra. […]
Ary maro ireo nilaza fa lainga fotsiny ny fampanantenàna fivoarana avy tamin'ny fanjakàna Silamo:
“Fampanantenana poakaty fotsiny ireo rehetra henontsika mikasika ny fivoaran'ny Fanjakana an'ny al-Baghdadi, ary zaraina amin'ireo mpikambana ao aminy ihany ireo zavatra tokony hozaraina — indrindra ireo mpifindra monina.”
وينقل الناشط أحمد عن أحد سكان مدينة منبج، ويدعى أبو جاسم، قوله: “بأنه ونتيجة للضرائب التي تفرضها القوة الأمنية على المواطنين في مناطق منبج والباب وجرابلس إضافة للتضيق الكبير على الناس في هذه المدن فإن كل شيء يجب أن تعمله يتوجب وجود موافقة أمنية وكأننا في دولة الأسد”.
Araka ny mpikatroka mafana fo antsoina hoe Ahmed, miteny amin'ny anaran'ny Abu Jassim (fiteny Manbij ao an-toerana): “Noho ireo hetra noteren'ireo tafika mitam-piadiana haloan'ireo olon-tsotra ao amin'ireo faritr'i Manbij sy Bab ary Jarables, mila mampiseho ny fankatoavan'ny fiarovam-pirenena daholo ireo taratasy ofisialy rehetra ilainao, sahala amin'ny hoe ao amin'ny Fanjakan'i Assad isika.”